News 18 Nepal || काग्रेंस नेतासहित थप ७ जना कोरोना संक्रमितको निधन
काठमाडौं । काग्रेंसका नेतासहित थप सात कोरोना संक्रमितको निधन भएको छ । नेपाली कांग्रेस मोरङ जिल्ला सदस्य ५४ वर्षीय दिना मण्डलको ज्यान गएको हो । कोरोना संक्रमण देखिएपछि विराटनगर महानगरपालिका ८ का मण्डललाई उनको प्लाज्मा थेरापी विधीबाट विराट मेडिकल कलेजमा उपचार सुरू गरिएको थियो ।
उपचारका क्रममा उनको शनिबार बेलुका निधन भएको विराटनगर महानगरपालिका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश कार्कीले जानकारी दिए । यस्तै सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा पनि थप एक संक्रमितको ज्यान गएको छ ।
धरान १७ का ६२ वर्षीय महिलाको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा शनिबार दिउँसो ३ बजे ज्यान गएको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. आशिष श्रेष्ठले जानकारी दिए । असोज २० गते कोरोना पुष्टि भएकी ती महिलालाई शुक्रबार मात्रै अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनमा मिर्गौलासम्बन्धी पूरानै समस्या रहेको डा. श्रेष्ठले बताए ।
धनगढीमा पनि थप एक संक्रमितको ज्यान गएको छ । डोटीका व्यापारीको धनगढीमा कोरोनाबाट ज्यान गएको हो । जेभी आयल स्टोर दिपायलमा कार्यरत कोरोना संक्रमित कर्णबहादुर भण्डारीको निधन भएको हो । कोरोना संक्रमित भएपछि प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचारत भण्डारीको शनिबार ज्यान गएको हो ।
त्यस्तै पोखरामा मात्र ४ जना संक्रमितको ज्यान गएको छ । पोखरा महानगरपालिका १ का ४२ वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको शुक्रबार बेलुका ७:४५ बजे चरक मेमोरियल अस्पताल पोखरामा उपचारका क्रममा ज्यान गएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ । असोज ३० गते उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका उनमा कात्तिक ३ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
यस्तै पोखरा महानगरपालिका-२२ का ६८ वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको पनि शनिबार बिहान साढे ९ बजे गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा निधन भएको छ । उनमा कात्तिक ०६ गते कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको थियो । ७ गते अस्पताल भर्ना उनमा निमोनियाको पनि समस्या रहेको थियो ।
पोखरा महानगरपालिका-३१ का ५८ वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको पनि शनिबार दिउँसो ४:२५ बजे ज्यान गएको छ । उनको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सघन उपचार कक्षमा निधन भएको हो । कात्तिक ७ गते कोरोना पुष्टि भएका उनमा निमोनिया, उच्च रक्तचाप र मधुमेहको पनि समस्या रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका-१५ का ५२ वर्षीया कोरोना संक्रमित महिलाको पनि शनिबार राति १०:२० बजे पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको सघन उपचार कक्षमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको छ । उनमा शनिबार नै कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएपछि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । योसँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान जानेको संख्या ६३ पुगेको छ ।
आज काठमाडौंको तापक्रम यो वर्षकै कम, कस्तो रहला दिनभरको मौसम ?